Bahleli lubhojozi yizilwane zomfowabo | News24
Bahleli lubhojozi yizilwane zomfowabo
Durban - Zehla mi izinyembezi kowesifazane waseMount Royal, enyakatho yeTheku okhala ngokuthi bahlushwa ngotokoloshe bomfowabo oboshiwe, owabathatha enyangeni ngoba efuna ukuceba ngabo.
UNcamisile Zulu, 32, (okungelona igama lakhe langempela) ube nengxoxo ekhethekile neLANGA mayelana nobunzima abhekene nabo yena nodadewabo ngenxa yalezi zilwane. Uthi umfowabo uthenge labo tokoloshe enyangeni yaseNdwedwe, enyakatho yeTheku ngo-2015 efuna ukuceba ngoba esekhathele wukuba baphile ngokuxakeka njengoba bashonelwa ngabazali besabancane.
Utshele ILANGA ukuthi umfowabo ube neshwa waboshwa esanda kubalanda otokoloshe, bengakaqali nokumngenisela imali.
"Uboshwe ngo-2015 ngecala lokubulala usomatekisi. Ubethenjiswe ukuthi uzokhokhelwa itshe lemali ngokwenza lowo msebenzi. Icala ligcine limlahlile ngonyaka ophelile wagwetshwa iminyaka engu-25 ngecala lokubulala. Ngesikhathi eboshwa umfowethu, besingazi ukuthi unezilwane kwaze kuba seziqala ukusihlupha ngoba zingasanakiwe nokudla zingasakutholi," kusho uZulu.
OLUNYE UDABA:Uthwele kanzima ohlezi eculelwa otokoloshe
Uthi umuntu obazi ukuthi umfowabo unotokoloshe yintombi yakhe abehlala nayo endlini yakhe esegcekeni.
"Besike siyizwe intombi kamfowethu eseboshiwe ikhuluma ithi isayophakela izilwane zakhe kodwa singanaki, sizitshele ukuthi iyadlala. Indaba yonakale ngesikhathi sesiyixosha ekhaya ngoba ibingasaziphethe kahle isiqomile umfowethu eboshiwe.
"Ihambe yazishiya zodwa lezi zilwane... Ngosuku ehambe ngalo ekhaya ilikhiphe ngembaba elokuthi ifuna ukusilaya njengoba siyixoshile, izosishiya nezilwane zomfowethu," kusho yena.
Uthi isihambile intombi, ziqalile ukuhlupha ngoba bese zingasaphakelwa ukudla.
"Ziqale ngokulwa nengane kadadewethu encane yomfana, ize isho ukuthi iyazibona," kusho yena. Uthi kakugcinanga lapho ngoba bese zilala nabo zenza nabo ucansi. Udadewabo obekhulelwe uze waba nenkinga ngesikhathi esebeletha ingane yakhe encane.
"Uthi kumanje kabalali bengayishunqisele ingane encane ngoba ikhala kuze kuse.
"Ukudla bekuphela endlini singazi ukuthi kushonaphi Siye kumuntu obonayo okuqinisekisile ukuthi kunezilwane ekhaya.
"Sinikele kumfowethu ejele siyofuna ukuba asichazele kabanzi ngalezi zilwane okuthiwa ngezakhe. Uzivumele ngowakhe wathi wazilanda enyangeni eseNdwedwe ngoba efuna ukuceba ngaphambi kokuba aboshwe.
"Uthi izilwane zakhe wayetsheliwe ukuthi kumele zinakekelwe ngokunikwa ukudla.
"Inkinga enkulu esibhekene nayo wukuthi inombolo yenyanga ezathengwa kuyona lezi zilwane kayisasebenzi. Kunzima nokuthola umuzi wayo ukuze izolanda izilwane zayo ngoba umuntu owazithenga uboshiwe, akekho ozozinakekela," kusho uZulu.
Uthi umfowabo ubatshele ukuthi indaba yonakele ngesikhathi sekuhambe intombi njengoba bona (odadewabo) bengene endlini yakhe bakhipha izimpahla zakhe bazifaka endlini enkulu.
"Umfowabo usitshele ukuthi izilwane zithole ithuba lokuphuma zigcwale igceke zazicanasela nasendlini. Enye inkinga athi idale lokhu, wukuthi bese zingasaphakelwa sezinolaka.
"Inkinga esibhekene nayo manje wukuthi sizozixosha kanjani ekhaya ngoba sezisifakele isigcwagcwa komakhelwane kabasasifuni endaweni, bakhuluma ngathi bathi sinezilwane," kusho uZulu.
Uthi umfowabo ubethanda impilo esheshayo, yingakho bengazange bathuke ngesikhathi ebatshela ukuthi izilwane ngezakhe.
"Sesihlala sesaba ngoba omakhelwane bangaze basenze okubi endaweni bashise nomuzi wasekhaya ngenxa yazo," kuphetha uZulu.
Uthi izingane ezincane zakomakhelwane ziyasho ukuthi ziyazibona lezi zilwane, kepha bona bebadala bangaboni lutho.
UDkt Mkhuluwe "Zihlahlazemithi" Cele owuqweqwe lenyanga yaseNgonyameni, eningizimu yeTheku, uthi inkinga yalezi zingane ingalapheka uma zingathola inyanga engawenza kahle lo msebenzi.
Uxwayise ngokuthi zigade izinyanga mbumbulu ezizothi ziyakwazi ukuxosha izilwane kanti zidlala ngazo.